Fiterahana soavaly | Soavaly Noti
La fananganana soavaly dia zavatra tsy tokony ho adino, indrindra raha izay tiantsika no hahatratra ny taranaky ny biby. Amin'ity habaka ity dia ho hitanao ny zava-drehetra mifandraika amin'ity safidy ity, fananahana, fananahana ary maro hafa. Izany rehetra izany hahatratrarana izany miteraka ny biby fiompinay ary omeo zanaka sarobidy izahay.
Ary koa antsipiriany hafa any mba horaisina ho toy ny karazan-karazany na aiza no ahazoana manalefaka ny vadintsika. Izany rehetra izany ao amin'ity habakabaka ity ary raha milaza foana isika fa hery ny fampahalalana dia tsy maintsy ampandrenesina isika mba tsy hanao fahadisoana amin'ny zavatra maro ary hahatadidy hatrany fa eo amin'ny serivisinay ireo mpitsabo biby.
Ilay fantatra amin'ny anarana hoe "Yeguada Militar" dia nanomboka tany Espana taorian'ny fiovana ara-tsosialy sy toekarena vokarin'ny Ady ...
ny Carlos Garrido hace 4 taona .
Ao anatin'ny tontolon'ny soavaly dia ahitantsika endrika sy karazany maro izay mety hahaliana antsika rehetra izay tia ...
Ny vavy dia miditra amin'ny hafanana amin'ny lohataona na amin'ny fiandohan'ny fahavaratra, izany hoe polyestric amin'ny vanim-potoana, izay midika fa ...